Wararkii ugu dambeeyay ee xaalada KGS: “Doorasho dhici mayso iyo doorasho waa dhacaysaa” – Radio Daljir
Noofember 7, 2018 7:58 b 0
inta badan xildhibaanadii maamulka KGS ee ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo. Xildhibaanada ayaa waayahaan ku sugnaa Xamar ayada oo odayaasha dhaqanka ee KGS ay ku eedeeyeen kuwo huteelo ugu xirnaa xukuumadda Farmaajo, qorshahooduna yahay faragalinta doorashada iyo in ay taageeraan musharraxa Nabad iyo Nolol, musharrax Laftagareen.
Soolaabashada xildhibaanada ayaa ku soo aadday ayada oo shalay ay Golaha Odayaasha Dhaqanka ee KGS ay dib-dhigeen doorashada madaxweyne ee KGS. Xildhibaanada soolaabtay ayaa sheegay in doorashada aysan marnaba waqtigeeda ka dib-dhici doonin. Joogitaankooda Muqdisho ayey xildhibaanadu ku fasireen “casuumaad ay ka heleen Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.”
Xaaladda siyaasadeed ee KGS ayaa hadda ah mid aan sugneyn oo ay isku hardinayaan Madaxweyne Shariif Xasan, mushaarixiinta loolanka madaxtinimo, iyo waliba xukuumadda Madaxweyne Farmaajo oo ayana la safan musharrixiinta qaar.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa u arka in faragalinta Madaxweyne Farmaajo iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay faragalinayaan doorashada Koonfur Galbeed tahay mid qabiileysan, khatarna ku ah amniga, miisaankii siyaasadeed iyo kan qabaa’il ee Koonfur Galbeed. Sidaas darteed asaga oo ciyaaraya siyaasad xeeladeysan waxa uu garab ka helay odayaasha dhaqanka iyo guddiga doorashooyinka, waxa uuna ka hordagay dhammaan musharrixiinta KGS iyo Madaxweyne Farmaajo.
Xaalku weli ma sugna, saacad kastana waxaa la fili karaa in uu isbadal ku yimaado hannaanka siyaasadeed ee maamulka Konfur Galbeed oo hadda galay marxalad ka duwan tii shalay, ahna doorasho dhici mayso iyo doorasho waa dhacaysaa.
Taliye Cabdishukri: ”Puntland waxa ay galaysaa dagaal lagu difaacayo midnimada laguna soo celinayo dhulka maqan” (dhegayso)